Version update – AsiaApps
Android Go ဆိုတာဘာလဲ?
October 29, 2018 minn2unFeaturesNo Comment on Android Go ဆိုတာဘာလဲ?
Android ဟာ အမြဲတမ်း လွယ်ကူရိုးရှင်းမနေပါဘူး။ Android သုံးထားတဲ့ ဖုန်းတိုင်းဟာလည်း Version တွေ မတူကြပါဘူး။ စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေက အသစ်ထွက်လာမဲ့ ဖုန်းတွေကို Update ဖြစ်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ထည့်ပေးဖို့ သူ့ထက်ငါ ကြိုးစားနေချိန်မှာပဲ…
April 25, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on iOS 11.3.1 version အသစ်ကတော့ မကြာသေးခင်အချိန်ကထွက်ရှိလာပြီနော်
Apple အနေနဲ့ iOS 11.3 ကို လွန်ခဲ့တဲ့ မတ်လအကုန်လောက်က ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၁ လကျော်အကြာ ပြီးခဲ့တဲ့ အချိန်အနည်းငယ်ကပဲ iOS 11.3.1 version အသစ်ကိုထုတ်လုပ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိထွက်ရှိထားတဲ့ iOS 11.3.1 ဟာ…
January 22, 2018 January 22, 2018 MoonApp NewsNo Comment on Live Video တွေကို Direct မှ ဝေမျှလို့ရနေပြီဖြစ်တဲ့ Instagram
နာမည်ကြီး Social media website apk တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Instagram က live video တွေကို Direct မှာ ဝေမျှလို့ ရနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင် live video ကိုရော ကိုယ်…